Daawada cusub ee COVID waxay badbaadineysaa nolosha Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Daawada cusub ee COVID waxay badbaadineysaa nolosha Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Cote d'Ivoire • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wareysiyo • Investments • News • Dadka • Ammaanka • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Daawada dabiiciga ah ee horeyba u jirtay sanado waxay noqon kartaa jawaabta Afrikaanka ee COVID-19.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay maanta fududeeysay kulan zoom ah oo ay maanta la yeelatay Mr. Cuthbert Ncube, Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika oo sheegay in dawadani ay badbaadisay naftiisa.
Daawada cusub ee dabiiciga ah ee COVID-19 oo ku saleysan maaddooyinka maxalliga ah iyo kuwa dhaqameed ayaa ka bogsatay Cuthbert Ncube, Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika, xaalad halis ah oo ah infekshanka COVID-19
Hogaamiyaasha Dalxiiska ee Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN) oo ay ku jiraan xogheyihii hore ee UNWTO ayaa maanta ku kulmay wacyi galin si looga hadlo. Daawo Su’aalaha iyo Jawaabaha.
Warshadaha Big Pharma waxaa laga yaabaa inaysan jeclayn horumarka noocaas ah. Gudiga Dalxiiska Afrika (ATB) iyo World Network Dalxiisyada Fulinta (WTN) ayaa qorsheynaya inay kala hadlaan saraakiisha Ivory Coast sidii looga caawin lahaa wacyigelinta iyo baahinta.
Cuthbert Ncube waa Gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika. Wuxuu yiri maanta dawo dabiici ah oo lagu magacaabo BJ 12 oo ay soo saareen koox cilmi baarayaal ah oo uu hogaaminayo Dr. Diamana oo fadhigiisu yahay Abidjan ayaa badbaadisay noloshiisa.
Cuthbert wuxuu ku yiri wicitaan dhawaq maanta, "Waa cabitaan sharoobo ah; waxaad qaadataa laba dhalo maalintii - mid subaxdii iyo fiidkii. Waxaan dareemayaa wanaag iyo xoog; kaliya waxaan ka shaqeynayaa sidii aan ku heli lahaa xooggayga. ”
Hogaamiyaasha dalxiiska ee ka kala yimid daafaha dunida ayaa maanta isugu yimid kulan ku saabsan zoom oo ay soo abaabuleen eTurboNews iyo Livestream.safarka waayo, Shabakada Dalxiiska Adduunka.
Natiijada Imtixaanka POSITIVE COVID-19
Sababta hogaamiyaasha caalamka, oo uu ka mid yahay Dr. Taleb Rifai, Xoghayihii hore ee UNWTO; Alain St. Ange, Wasiirkii hore ee Dalxiiska ee Seychelles; Dr. Peter Tarlow oo ah khabiir ku xeel dheer amniga dalxiiska iyo amniga kana yimid Texas, USA oo ay weheliyaan hogaamiyeyaal kale oo sare oo dalxiis oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa dhageystay Cuthbert Ncube. Sheekadiisu waxay ahayd mid soo jiidasho leh oo laga yaabo inay horumar ka gaarto la-dagaallanka Coronavirus.
Cuthbert wuxuu helay imtixaanka COVID-19 bishii Janaayo 12 magaalada Pretoria. Waxaa laga xareeyay diyaarad ka duushay Johannesburg kuna sii jeeday Abidjan 13-kii Janaayo si uu ula kulmo wasiirka dalxiiska ee Ivory Coast si ay ugala hadlaan UNWTO doorashada Xoghayaha Guud. Ivory Coast waxay xubin ka tahay Golaha Fulinta ee UNWTO.
In kasta oo Cuthbert si fiican u dareemay waqtigaas, haddana imtixaankiisii ​​'COVID-19' wuxuu ku soo noqday si wanaagsan. Natiijo ahaan, Guddoomiyaha ATB wuxuu aaday guriga si uu u go'doomiyo.
Nasiib darrose, Cuthbert wuxuu yeeshay calaamado halis ah oo ay ka mid yihiin cunno xumo, dhibaatooyin xagga neefsashada ah, iyo qandho sare. Gebi ahaanba wuu lumay codkiisii ​​isagoo isku dayaya inuu neefsado.
Markii Mr. Ncube ay ahayd inuu baajiyo safarkiisa Ivory Coast, Dr. Diamana oo ka socda Côte d'Ivoire ayaa isla markiiba dhalooyin ka mid ah sharoobadiisa COVID-19 geeyay South Africa. Markii ay timid Janaayo 22 guriga Cuthbert ee Pretoria, wuxuu si macno leh ugu dagaallamayay naftiisa.
Cuthbert ayaa u sheegay eTurboNews: “Waxaan helay daawada 22-ka Janaayo 2021. Isla markiiba waxaan bilaabay inaan ka qaato daawada - sharoobada BJ-12 - ee laga helo Dr. Diamana kadib amarkii uu siiyay Agaasimahiisa Xiriirka Dibadda, Mudane Grah. Sharoobada waxaan u qaatay sidii la ii faray maalmo kadibna waan bogsaday.
Sidaan hadda adiga kula xiriiray, rabitaankeygii wuxuu soo laabtay 75%. Waxaan bilaabay jimicsikeyga caadiga ah maalin kasta, tamarteyda ayaa soo noqoneysa. Maanta, runtii waxaan dareemayaa wax aad u wanaagsan. ”
CONTACT ETURBONEWS LAMBARADA XIDHIIDHKA
Dhanka kale, Mudane Ncube wuxuu diyaariyey dhalooyinka qaar in loo diro xirfadle kale oo dalxiis oo la buka COVID-19. Qofkani wuxuu ku sugan yahay Boqortooyada Eswatini. Wuxuu sidoo kale kasoo fiicnaaday xaalad aad u daran.
Mr. Cuthbert wuxuu ku qanacsan yahay in waxsoosaarkan dabiiciga ah ee Afrika oo dhan uu noqon karo kaalintii Afrika ee la dagaalanka aafada.
Xirfadlayaasha dalxiiska ee dooda maanta ayaa isku raacay. Waa la filan karaa in warshadaha Big Pharma aysan jeclaan karin horumarka noocan oo kale ah ee kula tartamaya alaab dabiici ah oo aan kiimiko ahayn oo kharash yar.
DHAGEYSO MR. CUTHBERT NCUBE IYO BARNAAMIJYADA BULSHADA
Madaxa USTOA ee Horumarinta Wadajirka ah ee Malta iyo Israel
Swoop: Duulimaadyada ka imanaya Winnipeg ilaa Puerto Vallarta...
Shirka G20 Rome: Xidhitaanka shir jaraa'id ee 31…
Hal qof oo shaqaale ah ayaa dhintay, saddexna waa la dhigay isbitaal ku yaal Spain
Diyaarada Qatar Airways ayaa markii ugu horeysay ku biirtay IATA CO2NNECT
Diyaarad nooca F-35 ee laga lee yahay dalka Britain ayaa ku burburtay...
Goobta Safarka ee ay Jecelyihiin Dadka Mareykanka Xagaagan...
Suuqa Safarka Carabta: Noocyada Dalxiiska Anshaxa ayaa hadda ah...